बाबाको मिर्गौला, पुकारको प्रेरणा : नयाँ जीवनको आधार – Nepali Health
बाबाको मिर्गौला, पुकारको प्रेरणा : नयाँ जीवनको आधार
२०७४ फागुन १० गते १३:३५ मा प्रकाशित
पन्ध्र बर्षमा करातेको ब्ल्याक बेल्ट, १६ बर्ष मै बिहे अनि १८ बर्ष पुग्दा नपुग्दै मिगौला फेल । भर्खर उनन्तीस बर्ष लागेकी गीता श्रेष्ठको जीवनका मुख्य घटनाक्रम यति मात्रै हो भन्ने ठानियो भने त्यो अपुरो हुन्छ । किनभने यसपछिका एघार बर्षमा उनले आफ्ना जीवनका अझ महत्वपूर्ण उतारचडाव पार गरेकी छन् ।
हजुर, हामी जीवन केलाउदैछौँ एक जना मिर्गौला प्रत्यारोपी युवती गीता श्रेष्ठको ।
खोटाङ दिक्तेल स्थायी घर भई हाल ललिलपुरको सानेपा बसोबास गर्ने श्रेष्ठको आफै मिर्गौलाकी विरामी त हुन नै आफूजस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका र गर्न चाहनेका लागि प्रेरणाका स्रोत पनि ।
कलिलो उमेरमा राष्ट्रिय खेलाडी बनेकी उनी आफ्नै रहरले कलिलै उमेरमा बेहुली बनिन् । तर त्यो कलिलो उमेरका सुखद अनुभूति धेरै लामो समय टिक्न पाएन । किनभने उनको कलिलो उमेर (१८ बर्ष)मै दुबै मिर्गौला फेल भयो ।
त्यतिवेला जीवन करीब करीब सकिए जस्तो लागेको थियो विगत सम्झँदै उनले भनिन्, ‘तर त्यो निरासाको बादल पनि ममा धेरैसमय टिक्न सकेन । मैले आत्मविश्वास यति दह्रो बनाएँ कि त्यति ठूला ठानिएका मेरा जीवनका चुनौती सजिलै पन्छाएर अघि बढेँ ।’
मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरेपछि आमा बनेकी गीताले आफ्नो पछिल्लो एघार बर्षको कथा यसरी सुनाइन :
यसरी फेल भयो मिर्गौला
खोई के कारणले हो मेरो सानै देखि उच्च रक्तचापको समस्या थियो । मैले औषधि पनि खाईरहेकी थिएँ । एक दिन रक्तचाप यसरी बढ्यो कि माथिको २५० र तलको १५० सम्म पुगेको रहेछ । त्यतिवेला नै मेरो दुबै मिर्गौला ड्यामेज भएको हो ।
गाँउमा जन्मे हुर्केकी केटी थिएँ । सानै देखि खेलकुदमा शौख थियो । १५ बर्ष नपुग्दै करातेमा व्ल्याक बेल्ट लिएकी थिएँ । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भिडिसकेकी थिएँ । तर रोग दुस्मन बनेर निस्कियो । शरीरलाई क्षति पुरयाएर गयो ।
माइतीको सहयोगमा पुर्नजन्म
मेरो सानै उमेरमा विहे भएको हो । माया बसिसकेपछि मागी विहे । तर विहे गरेको दुई वर्ष विताउन नपाउँदै दुईवटै मिर्गौला फेल भयो ।
त्यो पनि केही पछि थाह भयो । म विरामी परेपछि सुरुमा त घरबाट उपचारको लागि चासो लिइएको थियो तर भयंकर खर्च लाग्ने र बाच्ने सम्भावना नै कम हुने भन्ने हल्ला चलेपछि घरका परिवार पछि हटे । यद्धपी मेरो श्रीमान् मलाई जसरी पनि उपचार गर्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो । तर पढदै गरेको भर्खरको विद्यार्थीले चाहेर मात्रै हुने होइन । खर्च उहाँको हातमा थिएन ।
म निकै निरास भईसकेकी थिएँ । यो सबै समस्या बुझेका मेरा बाबाले ढिला नगरी मेरो घरमा आउनुभयो र भन्नुभयो, ‘कत्ति निरास नहो छोरी म दिन्छु तलाईँ मिर्गौला । उपचारमा खर्च जति लाग्छ म बेहोर्छु ।’
सानै देखि छोराछोरीको उन्नती प्रगतिमा रमाउने मेरा बुबाको त्यो कुरा पछि म यत्तिकै खुशी भईहालेँ । बुबासंगै उपचारका लागि काठमाडौँ आएँ । काठमाडौँ आएर राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रमा डायलासिस गर्न थालियो । प्रत्यारोपण भने यहाँ हुने अवस्था थिएन । यहाँ नौ महिना डायलासिसमा विताएपछि भारतको चन्डीगडमा गएर प्रत्यारोपण गरियो ।
प्रत्यारोपणका लागि त्यतिवेला करीब १३ लाख रुपैयाँ लागेको थियो । मलाई मेरो बुबाले नै मिर्गौला दान गर्नुभएको हो । अहिले म बुबाको मिर्गौला लिएर बाँचेकी छु ।
आरोग्यसंगको सामिप्यता र खेलकुद यात्रा
दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा तीन बर्ष अघि भएको एथलेटिक्स प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा गीता
मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि फलोअप गरि रहनुपर्ने भएकोले मलाई बुबाले काठमाडौँमै डेरा खोजिदिएर बस्ने व्यवस्था गर्नु भयो । म यतै थिएँ । बेला बेलामा डाक्टरकोमा फलोअप गर्नुपर्दथ्यो । जाने गर्थेँ । त्यहाँ म जस्तै अन्य साथीहरु पनि भेट हुन्थ्यो ।
यत्तिकैमा एक दिन कुनै साथीले सुनाइन, ‘आरोग्य प्रतिष्ठानले मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरेकाहरुबीच खेल खेलाउँदै छ रे’ भन्ने कुरा । पहिलेको खेलाडी भएर होला खेलकुद भन्ने वित्तिकै चासो भईहाल्यो । अनि साथीसंगै आरोग्यतिर बुझ्न गयौँ । हो रहेछ । म खेलकुदमा भाग लिने निधो गरेँ ।
नयाँ बर्षका बेला हुनुपर्छ । पहिलो पटक भएको त्यसप्रकारको खेलकुद अन्तरगर्त दौडमा भाग लिएँ र प्रथम भएँ । तपाईँलाई सुनाउँ, अहिलेसम्म यसप्रकारको खेलकुद ८ पटक भयो र हरेक बर्ष म प्रथम हुँदै आएकी छुँ ।
त्यतिवेला नै भेट भयो बरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठसंग । मिगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिपनि कम छैनन् है भनेर उत्प्रेरित गर्न यस्तो खालको आयोजना गर्न थालिएको हो जस्तो लाग्यो । तर यसले हामीलाई धेरै नै उत्प्रेरित गरयो । उहाँसंग भेटभएपछि नियमित रुपमा सल्लाह सुझाव दिन थाल्नुभयो । खेलकुदमा हौसला दिइराख्नुहुन्थ्यो ।
यसैक्रममा तीन बर्ष अघि उहाँहरुकै प्रयासमा प्रत्यारोपिहरुबीच हुने अन्तराष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा भाग लिन दक्षिण अफ्रिका समेत पुगेँ । त्यहाँको दौडमा पनि पहिलो त भएकैँ थिएँ तर नियम अनुसार भएनछ । लाइन क्रस नगरी दौडिनुपर्नेमा मेरो लाइन क्रस भएछ । पुरस्कृत भइन तर आयोजकले मेराबारेमा खुबै प्रसंशा गरेका थिए ।
सन्तान प्राप्तीको मोह
मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि जन्मिएको चार बर्षीय छोरासंग गीता
विहे पछि सन्तान प्राप्तीको मोह कसलाई नहोला र ? त्यसैले हामीलाई पनि हुनु स्वभाविक थियो । तर मेरो मिर्गौला फेल भैदियो । मर्ने बाच्ने नै ठेगान नभएका बेला सन्तान जन्माउने बारे सोच्न सकिने कुरा पनि भएन । तर जब प्रत्यारोपण भयो डाक्टरको फलोअप लिन थालियो । विस्तारै सन्तान प्राप्तिको मोह जागृत हुन थाल्यो ।
डाक्टरकै सल्लाहपछि प्रत्यारोपण गरेको चार बर्षपछि म आमा बने । छोरी जन्मिईन तर चार दिनमै उसको प्राणपखेरु उड्यो । त्यसको दुई बर्ष पछि पुन छोरा जन्मियो । अहिले छोरा चार बर्षको भईसकेको छ ।
प्रेरणाको स्रोत बाबा अनि डा. पुकार
एघार बर्ष अघि प्रत्यारोपण गर्न १३ लाख बढी खर्च भयो । त्यसपछि करीब तीन बर्षसम्म मासिक ३६ हजार बढीको औषधि खानुपथ्र्यो । घरबाट त्यतिका पैसा आउनेकुरा थिएन ।
यो सब बुबाले व्यवस्था मिलाउनुभयो । कसरी मिलाउन सक्नुभयो होला ? सम्झदै आङ सिरिङ्ग हुन्छ । पछि पछि त श्रीमान् पनि विदेश जानुभयो । कमाउन थाल्नुभयो र मेरो औषधोपचारमा सहयोग मिल्यो । त्यसैले पहिलो प्रेरणाको स्रोत बाबालाई मान्छु ।
मेरो दोस्रो प्रेरणाको स्रोत डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । प्रत्यारोपणपछिको निरास जीवनलाई अवसरमा बदल्ने उपाय उहाँले खोजिदिनुभयो । उहाँकै सहयोगमा मैले दक्षिण अफ्रिका पुगेर खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने मौका पाएँ । यहाँ हुने हरेक प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरुमा सहभागीता हुने अवसर पाएकी छु । उहाँले मेरो उपचार मात्रै होइन जीवन जीउने प्रेरणा समेत दिनु भएको छ ।
कुष्ठरोगीको खोजी अभियान शुरु
लमजुङको सामुदायिक अस्पतालमा एसएनसियू सेवा सञ्चालन गरिने